Fa maninona Andriamanitra no tsy mamaly ny vavako - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Nahoana no tsy namaly ny fivavako Andriamanitra?
"Nahoana Andriamanitra no tsy mihaino ny vavaka ataoko?", hoy foana aho fa tsy maintsy misy antony marim-pototra amin'izany. Angamba tsy nivavaka ny sitrapony aho, izay fepetra takin’ny Baiboly mba hahazoana valim-bavaka. Sao dia mbola misy ota tsy nanenenako teo amin'ny fiainako. Fantatro fa raha mijanona ao amin’i Kristy sy ao amin’ny Teniny aho dia mety ho voavaly kokoa ny vavaka ataoko. Sao dia resaka finoana izany. Rehefa mivavaka aho dia misy zavatra manontany ahy, saingy misalasala aho raha mendrika ny valiana mihitsy ny vavaka ataoko. Tsy mamaly vavaka tsy miorina amin’ny finoana Andriamanitra. Heveriko fa indraindray aho dia mahatsapa ho toy ny raim-pianakaviana ao Markus 9,24izay niantso mafy hoe: «Mino aho; ampio ny tsy finoako!" Fa angamba ny iray amin’ireo antony lehibe indrindra amin’ireo vavaka mahasosotra dia ny tokony hianarako hahafantatra azy lalina.
Rehefa maty Lazarosy, dia nilaza tamin'i Marta sy Maria rahavaviny fa narary i Lazarosy. Nanazava tamin'ny mpianany i Jesosy avy eo fa tsy ny fahafatesana io aretina io, fa hanome voninahitra an'Andriamanitra. Niandry roa andro talohan'ny niverenany nankany Betania izy. Ary rehefa afaka izany, dia maty Jesosy. Toa tsy voavaly ny antso vonjy avy amin'i Marta sy Maria. Fantatr'i Jesosy fa hanampy an'i Marta sy Maria ary ireo mpianatra koa hianatra sy hahita zavatra tena zava-dehibe! Rehefa niresaka taminy i Marta avy eo izay noheveriny ho tara kely dia nilaza taminy fa hatsangana i Lazarosy. Efa fantany fa hisy fitsanganana amin'ny maty "Andro farany". Ny tsy azony akory dia ny hoe i Jesosy mihitsy no fananganana amin'ny maty sy fiainana! Ary izay rehetra mino azy dia ho velona na dia maty aza. Vakiantsika ny Jaona 11, 23-27: «Hoy i Jesosy taminy: Hitsangana ny rahalahinao. Hoy i Marta taminy: Fantatro fa hatsangana amin'ny maty izy - amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Hoy i Jesoa taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy, dia ho velona na dia maty aza; ary izay velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany ve ianao? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko, mino aho fa ianao no Kristy, Zanak'Andriamanitra tonga teto an-tany. »Fotoana fohy talohan'ny niantsoan'i Jesosy an'i Lazarosy avy tao am-pasana, dia nanao vavaka teo imason'ny olona malahelo izy. ka nino izy ireo fa izy no ilay Mesia nirahin'Andriamanitra: «Fantatro fa mihaino ahy foana ianao; fa noho ny olona mijoro manodidina no ilazako izany, mba hinoany fa Ianao no naniraka ahy.
“Raha nahare ny fangatahan'i Marta sy i Maria avy hatrany i Jesosy rehefa avy nitaiza azy, dia maro ny olona no tsy nahatsapa an'io lesona lehibe io. Toy izany koa, afaka manontany izay hitranga amin'ny fiainantsika sy amin'ny fitomboantsika ara-panahy isika raha voavaly haingana ny vavaka rehetra nataontsika? Tena tiantsika ny hahatsapa fa hendry Andriamanitra; fa tsy tokony hahafantatra azy mihitsy.
Lehibe lavitra noho ny antsika ny hevitr'Andriamanitra. Fantany ny, rahoviana ary ny haben'ny ilain'ny olona iray. Raisiny ny zavatra rehetra ilainy. Raha manatanteraka fangatahana ho ahy izy dia tsy midika izany fa ny fahatanterahany dia tsara ihany koa ho an'ny olona hafa izay nangataka azy ny zavatra mitovy.
Araka izany, amin'ny fotoana hahatsapantsika fa avelan'Andriamanitra hivavaka amin'ny fahatezerana isika, dia tokony ho lavitra lavitra ny fanantenantsika sy ny an'ny hafa. Tahaka an'i Marta, andao hanakona ny finoantsika an'i Jesosy, Zanak'Andriamanitra, ary hiandry izay mahalala izay tsara indrindra ho antsika.